Articles – Page4– M Diary Channel
( ၃ ) ပွဲဆက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ သရဲနီ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး
ချာလီ မက်နေးဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အကယ်ဒမီ ကစားသမားဘဝ ဒုတိယရာသီမှာ ပုံစံကောင်း ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ မက်နေးကို လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၁ )
Articles November 26, 2021 November 26, 2021
နှစ် ( ၉၀ ) ကြာ မှတ်တမ်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ် ကာရစ်
မိုက်ကယ် ကားရစ်ဟာ ဗီလာရီးရဲနဲ့ပွဲစဥ်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ကို နိုင်ပွဲရရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ နည်းပြစွမ်းရည်ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အိုလေ ဂန်းနား ဆိုးရှား ထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက် ကာရစ်ဟာ
ပိုချက်တီနို ကိုခေါ်ယူဖို့ လာမယ့် နွေရာသီရောက်မှ နောက်တစ်ကြိမ် ကြိုးပမ်းဦးမယ့် ယူနိုက်တက်
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းရဲ့ နည်းပြဟောင်း ရန်းနစ်ကို ယာယီနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ သဘောတူညီမှု ရထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် အသင်းရဲ့ အမြဲတမ်း နည်းပြအဖြစ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ နည်းပြ ပိုချက်တီနိုကို သာ
ယာယီနည်းပြရာထူးအတွက် ချယ်လ်ဆီးကမ်းလှမ်းတုန်းက ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်နဲ့မှ လက်ခံခဲ့တဲ့ ရန်းနစ်
ယူနိုက်တက်ဟာ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်း နည်းပြဟောင်း ရန်းနစ်ကို အသင်းရဲ့ ယာယီ နည်းပြအဖြစ် (၆) လ စာချုပ်နဲ့ သဘောတူညီမှု ရသွားခဲ့ပြီး မကြာမီ အချိန်အတွင်း တရားဝင်
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ယာယီနည်းပြသစ်က ချယ်လ်ဆီးနဲ့ပွဲကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ လိုက်ပ်ဇစ် အသင်းရဲ့ နည်းပြဟောင်း ရန်းနစ်ကို (၆) လစာချုပ်နဲ့ ယာယီနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ဖို့ သဘောတူညီမှု ရသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ ရန်းနစ်ဟာ ယာယီနည်းပြထက် အမြဲတမ်း နည်းပြဖြစ်ဖို့ကိုသာ
(၁) လက်ရွေးစင် အသင်းနည်းပြ ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းနေခြင်းကြောင့် ဇီဒန်းက သရဲနီနည်းပြရာထူးကို စိတ်မဝင်စားတာဖြစ် (၂) ပရိသတ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သရဲနီဂျာစီပေါ်မှာ လက်မှတ် ရေးထိုးပေးခဲ့တဲ့ ပိုချက်တီနို
ယူနိုက်တက်ကို ရွှေခေတ်ပြန်ရောက်စေမယ့် နည်းပြသစ်?
အိုဝင်ဟားဂရေ့ဗ်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအကြီးအကျယ် အပြောင်းအလဲဖြစ်လာအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းပြအမည်ကိုဖွင့်ဟလာပါတယ်။ မန်ယူဟာတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကအိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားကိုရာထူးမှ ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မိုက်ကယ်ကာရစ်ကိုယာယီနည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ထားပြီးရာသီအကုန်အထိကိုင်တွယ်မယ့်ယာယီနည်းပြတစ်ဦး ရှာဖွေနေပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုမှာမန်ယူရဲ့ နံပါတ်တစ်ပစ်မှတ်ဖြစ်ပြီးဇီဒန်း၊ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ၊အဲရစ်တင်ဟက် တို့မှာလည်းမန်ယူရဲ့လျာထားစာရင်းတွင်ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မန်ယူတွင်အခြားလျာထားနည်းပြများလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အိုဝင်ဟားဂရေ့ဗ်ကတော့မန်ယူအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းပြကတော့စပိန်နည်းပြလူးဝစ်အန်းနရစ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလာပါတယ်။ မန်ယူအလယ်တန်းကစားသမားဟောင်းကအသက်၅၁နှစ်ရှိဘာစီလိုနာ နည်းပြဟောင်းမှာမန်ယူကိုအကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းဆိုသွားပါတယ်။
ပစ်မှတ်ဟောင်းကို ခေါ်ယူဖို့ ပြန်လည်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ယူနိုက်တက်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ တစ်ချိန်က သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လာဇီယိုကွင်းလယ်လူမီလင်ကိုဗစ်ဆာဗစ်ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ပြန်လည်ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်း ဆာဗစ်ကို စိတ်ဝင်စား ခဲ့ဖူးပေမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်မလာခဲ့ဘဲ အခုအချိန်မှာတော့ ကွင်းလယ်လူပေ့ါဘာက
သရဲနီနည်းပြရာထူးနေရာကို လိုင်ယွန်နည်းပြဟောင်းဂါစီယာနဲ့ အီတလီနည်းပြမန်စီနီ ဘယ်သူရောက်လာမလဲ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ နည်းပြသစ်ရာထူးအတွက် လိုင်ယွန်နဲ့ ရိုးမားအသင်းနည်းပြဟောင်းရူဒီဂါစီယာ၊ အီတလီအသင်းနည်းပြမန်စီနီတို့ကို ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဝက်ဖို့ဒ်ကို(၄-၁)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ နည်းပြဆိုးလ်ရှားနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီး ယာယီနည်းပြအဖြစ် ကာရစ်ကို ခန့်အပ်ထားပေမယ့် အတွေ့အကြုံရင့် နည်းပြတစ်ဦးကို
ယူနိုက်တက်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့ရဲ့ပစ်မှတ် အော်လ်မို လိုက်ပ်ဇ်စ်နဲ့လမ်းခွဲဖို့အသင့်ရှိနေ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ကခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားခံနေရတဲ့ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းရဲ့စပိန်ကြယ်ပွင့်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဒန်နီအော်လ်မိုဟာ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ အော်လ်မိုဟာ လူငယ်ကစားသမား ဘဝတုန်းက ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့လာမာစီယာအကယ်ဒမီမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိကစားခဲ့ဖူးပြီး